The Chin News
To share information of the chin people.
အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်များ ထုတ်ပြန်
အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက် မဲဆန္ဒနယ်များကို ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင် အောက်ပါအတိုင်း
ပြည်နယ်နှင့် တုိုင်းဒေသကြီးတခုစီလျှင် မဲဆန္ဒနယ် ၁၂ ခုစီဖြင့် စုစုပေါင်း မဲဆန္ဒနယ် ၁၆၈ ခုအတွက် သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဟု ထပ်မံထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းကို သြဂုတ် ၁၆ ရက်မှသည် သြဂုတ် ၃၀ အတွင်း လုပ်ရမည်ဟု မြန်မာအသံမှတဆင့် ထုတ်လွှင့်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
4. ချီဗွေ၊ ဆော့လော်၊ အင်ဂျန်းယန်
5. မိုးညှင်း ၁
6. မိုးညှင်း ၂
11. မံစီ၊ ရွှေကူ
1. လွိုင်ကော် ၁
2. လွိုင်ကော် ၂
3. ဒီမောဆို ၁
4. ဒီမောဆို ၂
5. ဖရူဆို ၁
6. ဖရူဆို ၂
7. ရှားတော ၁
8. ရှားတော ၂
10. ဖားဆောင်း ၂
1. ဘားအံ ၁
2. ဘားအံ ၂
3. လှိုင်းဘွဲ့ ၁
4. လှိုင်းဘွဲ့ ၂
5. ဖာပွန် ၁
9. ကော့ကရိတ် ၁
10. ကော့ကရိတ် ၂
11. ကြာအင်းဆိပ်ကြီး ၁
12. ကြာအင်းဆိပ်ကြီး ၂
1. ဖလမ်း ၁
2. ဖလမ်း ၂
5. တီးတိန် ၁
6. တီးတိန် ၂
11. ပလက်ဝ ၁
12. ပလက်ဝ ၂
2. ရွှေဘို၊ ဝက်လက်၊ ခင်ဦး၊ ဒီပဲယင်း
3. ကန့်ဘလူ၊ ကျွန်းလှ၊ ရေဦး၊ တန့်ဆည်
4. မုံရွာ၊ ဘုတလင်၊ အရာတော်
5. ချောင်းဦး၊ ဆားလင်းကြီး၊ ယင်းမာပင်၊ ပုလဲ၊ ကနီ
6. ကသာ၊ ထီးချိုင့်၊ အင်းတော်
7. ဗန်းမောက်၊ ကောလင်း၊ ဝန်းသို၊ ပင်လည်ဘူး
11. ခန္တီး၊ ဟုမ္မလင်း
12. လေရှီး၊ လဟယ်၊ နန်းယွန်း (နာဂကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ဒေသ)
1. ထားဝယ် ၁
2. ထားဝယ် ၂
6. မြိတ် ၁
7. မြိတ် ၂
1. ရေနံချောင်း၊ ချောက်
2. နတ်မောက်၊ မြို့သစ်
4. မင်းဘူး၊ ပွင့်ဖြူ
5. စလင်း၊ စေတုတ္တရာ၊ ငဖဲ
6. သရက်၊ ကံမ၊ မင်းတုန်း၊ မင်းလှ
7. အောင်လံ၊ ဆင်ပေါင်ဝဲ
8. ပခုက္ကူ၊ ဆိပ်ဖြူ
10. မြိုင်၊ ပေါက်
11. ဂန့်ဂေါ၊ ထီးလင်း၊ ဆော
2. သနပ္ပင်၊ ကဝ
3. ဝေါ၊ ဒိုက်ဦး၊ ရွှေကျင်
4. ညောင်လေးပင်၊ ကျောက်တံခါး
5. တောင်ငူ၊ ရေတာရှည်
6. ကျောက်ကြီး၊ ဖြူး
7. အုတ်တွင်း၊ ထန်းတပင်
8. ပြည်၊ပေါက်ခေါင်း၊ ပန်းတောင်း
9. ပေါင်းတည်၊ သဲကုန်း၊ ရွှေတောင်
10. သာယာဝတီ၊ လက်ပံတန်း
11. မင်းလှ၊ အုတ်ဖို၊ မိုးညို
12. ဇီးကုန်း၊ နတ္တလင်း၊ ကြို့ပင်ကောက်
1. အောင်မြေသာစံ၊ ချမ်းအေးသာစံ၊ ပုသိမ်ကြီး
2. ချမ်းမြသာစည်၊ မဟာအောင်မြေ၊ ပြည်ကြီးတံခွန်၊ အမရပူရ
5. မြင်းခြံ၊ နွားထိုးကြီး၊ ငါန်းစွန်း
6. တောင်သာ၊ ကျောက်ပန်းတောင်း
9. နေပြည်တော် ၁
10. နေပြည်တော် ၂
11. မိတ္ထီလာ၊ မလှိုင်
12. သာစည်နှင့် ဝမ်းတွင်း
1. မော်လမြိုင် ၁
2. မော်လမြိုင် ၂
8. သထုံ ၁
9. သထုံ ၂
5. ပေါက်တော၊ မြေပုံ
6. ရသေ့တောင်၊ မြေပုံ
7. ရသေ့တောင်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း
8. မောင်တော ၁
9. မောင်တော ၂
11. ကျောက်ဖြူ၊ မာန်အောင်
12. ရမ်းဗြဲ၊ အမ်း
1. ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း)၊ ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း)၊ မြောက်ဥက္ကလာပ
2. ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)၊ ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)၊ သာကေတ
3. တောင်ဥက္ကလာပ၊ ရန်ကင်း၊ သင်္ကန်းကျွန်း
4. တာမွေ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ ဒေါပုံ၊ ပုဇွန်တောင်၊ ဗိုလ်တထောင်
5. မရမ်းကုန်း၊ ဗဟန်း၊ ဒဂုံ၊ စမ်းချောင်း ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတား
6. ကမာရွှတ်၊ လှိုင်၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ လသာ၊ လမ်းမတော်၊ အလုံ၊ ဆိပ်ကမ်း
7. ခရမ်း၊ သုံးခွ၊ ကိုကိုးကျွန်း
8. သန်လျင်၊ ကျောက်တန်း၊ ဒလ၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တို
9. တွံတေး၊ ကော့မှူး၊ ကွမ်းခြံကုန်း
10. အင်းစိန်၊ မင်္ဂလာဒုံ
11. ရွှေပြည်သာ၊ လှိုင်သာယာ၊ ထန်းတပင်
12. တိုက်ကြီး၊ မှော်ဘီ၊ လှည်းကူး
1. တောင်ကြီး၊ ညောင်ရွှေ၊ ရပ်စောက်၊ ကလေ၊ ဖယ်ခုံ
2. လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လင်းခေး ခရိုင်
3. လားရှိုး၊ တန်းယန်း၊ မိုင်းရယ်၊ သိန္နီ၊ ကွမ်းလုံ
4. ကျောက်မဲ၊ သီပေါ၊ နမ္မတူ၊ နောင်ချို၊ မိုးမိတ်၊ မဘိန်း
6. ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းခတ်၊ မိုင်းယန်း၊ မိုင်းလား
7. တာချီလိတ်၊ မိုင်းဆက်၊ မိုင်းဖြတ်
8. ဓနုကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ (ရွာငံ၊ ပင်းတယ)
9. ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ (ဟိုပုံး၊ ဆီဆိုင်၊ ပင်လောင်း)
10. ပလောင်ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ (နမ့်ဆန်၊ မန်တုံ)
11. ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ (ဟိုပန်၊ မိုင်းမော၊ ပန်ဝိုင်၊ နားဖန်း၊ မက်မန်း၊ ပန်ဆန်း)
2. ကန်ကြီးဒေါင့်၊ သာပေါင်း၊ ကျောင်းကုန်း
3. ကျုံပျော်၊ ရေကြည်
4. ဟင်္သာတ၊ ဇလွန်
5. လေးမျက်နှာ၊ အင်္ဂပူ
6. မြန်အောင်၊ ကြံခင်း
8. မအူပင်၊ ညောင်တုန်း
9. ပန်းတနော်၊ ဓနုဖြူ
10. ဖျာပုံ၊ ဒေးဒရဲ
11. ဘိုကလေး၊ ကျိုက်လတ်
Posted by Dominique Thet Saw at 3:33 AM No comments:
အရပ်သားအမျိုးသားလွှတ်တော် (အထက်လွှတ်တော်) ကိုယ်စားလှယ် (၁၆၈) ဦးစီ ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်ရန် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများအလိုက် အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်များ စာရင်းကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်များအလိုက် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် တသီးပုဂ္ဂိုလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှ ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး တခုစီအတွက် အထက်လွှတ်တော် အမတ် (၁၂) ဦးစီကို ယခု သတ်မှတ်လိုက်သည့် မဲဆန္ဒနယ်အလိုက် လူထုက ရွေးချယ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
“ပြည်နယ် တိုင်းဒေသကြီး (၁၄) ခုက (၁၂) ယောက်စီလာမယ်။ အဲဒီ (၁၂) ယောက်ထဲမှာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းဒေသတွေက အမတ် (၁) ယောက်စီ ပေးခွင့်ရှိတယ်။ ပြည်နယ်တိုင်း ဒေသတခုစီကို အရပ်သားက ရွေးပေးရမှာ အမတ် (၁၂) ယောက်၊ စစ်တပ်က ဒီတိုင်း ထည့်မှာ (၄) ယောက်။ အဲတော့ ပြည်နယ်တိုင်း ဒေသတခုကို အမတ် (၁၆) ယောက်ရှိမယ်” ဟု ရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာစောင့်ကြည့်သူတဦးက ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (အောက်လွှတ်တော်) မှ ဥပဒေကြမ်းများကို စိစစ်မည့် အမျိုးသားလွှတ်တော် (အထက်လွှတ်တော်) အတွက် ပြည်သူလူထုက အမတ်လောင်း (၁၆၈) ဦး ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး စစ်ဦးစီးချုပ်က စစ်ဗိုလ် (၅၆) ဦးကို အမတ်အဖြစ် တိုက်ရိုက်ခန့်အပ်မည်ဖြစ်ရာ အထက်လွှတ်တော်အမတ် စုစုပေါင်း (၂၂၄) ဦး ရှိမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေအရ နာဂ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ (စစ်ကိုင်း)၊ ဓနု ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ (ရှမ်း)၊ ပအိုးဝ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ (ရှမ်း)၊ ပလောင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ (ရှမ်း)၊ ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ (ရှမ်း)၊ ၀ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း (ရှမ်း) တို့ကို အထက်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မြေ တခုစီအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးပြီး ယင်းဒေသများမှ အထက်လွှတ်တော်အမတ် (၁) ဦးစီ ရွေးချယ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်တင်သွင်းမှုကို ယခုလ သြဂုတ် (၁၆) ရက်မှ (၃၀) ရက်အတွင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းက အမည်စာရင်း တင်သွင်းမှုကို ပယ်ဖျက်လိုပါက စက်တင်ဘာ (၃) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်ဟု ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ကြေညာသည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို လာမည့် စက်တင်ဘာ (၆) ရက်မှ (၁၀) ရက်အတွင်း အပြီးသတ်စိစစ်မည်ဖြစ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိုသူများက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ ငွေကျပ် (၅) သိန်းဖြင့် အမည်စာရင်း တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
Posted by Dominique Thet Saw at 3:23 AM No comments:
The tribes of Chin People (Northern Chins and Central Chins)
A.—THE TIBETO-BURMANS. I.—THE WESTERN TIBETO-BURMANS. THE NORTHERN CHINS.
The Northern Chins form the uppermost section of the Chin belt, which extends down the western edge of Burma. The Chins course in their descent from the far north has been indicated in an earlier portion of this note. The Northern Chin country extends roughly from the 22nd to the 26th parallel of latitude, and includes the Chin Hills proper andanarrow strip of upland on the west of the Upper Chindwin District. What little is known of the inhabitants of this latter area, who are called the Kaswa Aswa, Nantaleik, Piya or Somra Chins, has for the most part been gleaned during the course of punitive expeditions. They merge in the far north into the Nagas (Tangkhuls or Luhupas) and others and only comparatively few of their villages are in administered British territory. Of the residents of the Chin Hills proper far more is known. Their home formsacompact block of mountainous country lying to the west of the Chindwin river between 21°45' and 24°N and 93°20' and 94°5'E and having an area of about 8,000 square miles, In 1901 they numbered about 84,000 souls. They are closely connected with the Lushais of Assam. The following are the principal tribes in the Chin Hills proper: the Soktes (including the Kanhow clan), Siyins, Tashons, Yahows, Whennohs, Lais (or Hakas), Klangklangs and Yokwas. The Soktes number about 9,000, the Siyins between 1,500 and 2,000. The total of the Tashons is approximately 39,000 and that of the Hakas (who are known to the Burmans by the nickname "Baungshe") 14,000. The Yahows and Whennohs number about 11,500, the Klang-klangs about 5,000 and the Yokwas between 2,500 and 3,000. For full particulars regarding the Northern Chins the reader is referred to the authorities quoted in the bibliographical note appended (vide page 53).
EXCEPT KAMIS AND MROS).
The Central Chins occupy the highland immediately to the south of the Chin Hills proper in the Pakokku Chin Hill Tract and in portions of the adjoining districts of Northern Arakan, Akyab and Kyaukpyu. The Southern Chins comprise the remnant who are found at the southern end of the Arakan Yoma on the borders of the Minbu, Sandoway, Thayetmyo, Prome and Henzada Districts, as well as the small scattered communities who have crossed the Iirawaddy and established themselves here and there in the country to the east of it. Owing to various causes the Central Chins have never been systematically studied asawhole and, though ample information has been collected regarding some of them, not only are there others—for the most part in the unadministered tracts—of whom little is known, but also the relation the different tribes bear to one another has never been fully brought out. Roughly speaking, however, there are four main tribes of Central Chins, namely, the Chinboks, the Yindus, the Kara is and the Mros. The last two—who have been inhabitants of Lower Burma for many years and have been commented on independently by several writers—will be dealt with separately. " Chinbok " and "Yindu"
Posted by Dominique Thet Saw at 2:02 AM No comments:
Universal Declaration of Human Rights (Burmese Version)
Posted by Dominique Thet Saw at 11:15 AM No comments:
Posted by Dominique Thet Saw at 11:08 AM No comments:
Plants of Chin State
Plants reported from Chin or as "widely distributed in the Union of Myanmar."
[From A Checklist of the Trees, Shrubs, Herbs, and Climbers of Myanmar. Contributions from the United
States National Herbarium. Volume 45: 1-590.]
Staurogyne polybotrya var. humilis
Staurogyne polybotrya var. thorelli
=Strobilanthes wardii var. atipes
Acer caudatum var. georgei
=Carissa carandas var. congesta
Brassaiopsis palmata var. polyacantha
=Spilanthes acmella var. calva
Erigeron alpinus var. khasiana
Brassica oleracea subsp. capitata
Brassica rapa var. toria
Caesalpinia pulcherrima fa. flava
=Caesalpinia pulcherrima var. flava
Cassia glauca var. suffruticosa
Cassia javanica subsp. renigera
Viburnum griffithianum var. grandiflorum
=Euonymus frigidus var. wardii
=Euonymus javanicus var. timorensis
Diospyros brachiata var. atra
Dalbergia velutina var. maingayi
Desmodium renifolium var. oblatum
Phaseolus radiatus var. grandis
Sesbania grandiflora var. coccinea
Vigna catjang var. sinensis
Castanopsis tribuloides var. echinocarpa
Castanopsis tribuloides var. ferox
Quercus lanceaefolia var. oemicostata
Quercus mespilifolia var. microcalyx
=Exacum tetragonum var. stylosa
=Aeschynanthus maculatus var. stenophyllus
=Leucas mollissima var. angustifolia
=Leucas mollissima var. scaberula
=Leucas mollissima var. strigosa
=Lagerstroemia flos-reginae var. angusta
Lagerstroemia speciosa var. intermedia
=Abutilon indicum var. populifolium
Abutilon indicum subsp. guineense
=Sida rhombifolia var. rhomboidea
Acacia decurrens var. mollis
Ficus foveolata var. maliformis
Ficus hirta var. roxburghii
Musa sapientum var. arakanensis
Musa sapientum var. champa
=Eugenia formosa var. ternifolia
Najas marina var. kashmirensis
Jasminum dispermum subsp. forrestianum
Jasminum diversifolium var. glabricymosum
Olea dentata var. salicifolia
Epilobium brevifolium subsp. trichoneurum
=Acriopsis javanica var. auriculata
Aerides crassifolia var. leonae
Aerides odoratum var. virens
Aerides x jansoni
Calanthe biloba var. obtusa
Calanthe vestita var. luteo-oculata
Calanthe vestita var. turneri
=Coelogyne ochracea var. conferta
Cymbidium lowianum var. iansonii
=Dendrobium pierardii var. cucullata
=Dendrobium pierardii var. latifolia
Dendrobium brymerianum var. histonica
Dendrobium capillipes var. elegans
Dendrobium cariniferum var. angustipetalum
Dendrobium cariniferum var. lateritia
Dendrobium chrysanthum var. anopthalma
Dendrobium chrysanthum var. micropthalma
=Dendrobium griffithianum var. guibertii
Dendrobium densiflorum var. schraederi
Dendrobium devonianum var. candidula
Dendrobium devonianum var. rhodoneura
Dendrobium falconeri var. gigantea
Dendrobium falconeri var. robusta
Dendrobium formosum var. berkleyi
Dendrobium formosum var. gigantea
Dendrobium formosum var. sulphurata
=Dendrobium farmeri var. aureoflava
Dendrobium heterocarpum var. henshallii
Dendrobium heterocarpum var. pallida
Dendrobium heterocarpum var. philippensis
Dendrobium infundibulum var. carnioptica
Dendrobium infundibulum var. jamesianum
=Dendrobium aggregatum var. jenkinsii
Dendrobium lituiflorum var. candida
Dendrobium lituiflorum var. farmeri
Dendrobium lituiflorum var. freemanii
=Dendrobium calceolaria var. calceolus
=Dendrobium moschatum var. cupreum
=Dendrobium falconeri var. albidula
=Dendrobium falconeri var. album
=Dendrobium farmeri var. albiflorum
Dendrobium pendulum var. albiflora
Dendrobium pendulum var. barberiana
Dendrobium primulinum var. gigantea
Dendrobium secundum var. nivea
Dendrobium tortile var. rosea
Dendrobium transparens var. alba
Dendrobium wardianum var. watsoni
Eria bractescens var. affinis
=Saccolabium acutifolium var. moulmeinense
Holcoglossum amesianum fa. album
=Vanda amesiana var. alba
Liparis paradoxa var. parishii
Paphiopedilum bellatulum var. luteo-purpureum
Paphiopedilum sallierii var. aurea
Paphiopedilum villosum var. boxalli
Paphiopedilum x sallierii
Pholidota imbricata var. coriacea
Rhynchostylis retusa var. majus
Thunia alba var. brymeriana
Thunia alba var. purpurata
Thunia alba var. triloba
Vanda coerulescens var. boxalli
=Vanda roxburghii var. concolor
=Vanda parviflora var. albiflora
Vanda x charlesworthii
Anthoxanthum horsfieldii var. angustum
=Bothriochloa intermedia var. punctata
=Chrysopogon montanus var. trinii
=Coix lacryma-jobi var. stenocarpa
=Dendrocalamus strictus var. prainiana
=Panicum miliare var. hirtum
=Pennisetum americanum convar. typhoides
=Oxytenanthera monadelpha var. densa
=Sorghum cernuum var. yemense
=Sorghum dochna var. atrum
=Sorghum dochna var. burmanicum
=Sorghum dochna var. melliferum
=Sorghum dochna var. obovata
=Sorghum dochna var. pulchrum
=Sorghum nigricans var. angolense
=Sorghum roxburghii var. hians
=Sorghum roxburghii var. parvum
=Sorghum roxburghii var. semiclausum
=Sorghum saccharatum var. atrum
=Sorghum saccharatum var. burmanicum
=Sorghum saccharatum var. melliferum
=Sorghum saccharatum var. pulchrum
=Sorghum nitidum var. fulvum
=Sorghum roxburghii var. fulvum
Polygonum barbatum var. stagninum
Polygonum chinense var. hispida
Pyrus vestita var. khasiana
=Paederia tomentosa var. glabra
Allophylus cobbe var. glaber
=Smilax elegans subsp. subrecta
=Smilax rigida subsp. myrtillus
Smilax myrtillus var. rigida
=Sterculia coccinea var. hamiltonii
=Sterculia rubiginosa var. ensifolia
=Vitis obtecta var. pilosum
Plants of Chin State (Myanmar)
Myanmar Plants Search
Posted by Dominique Thet Saw at 10:47 AM No comments:
Burmese Bible Online
Scribd for files sharing
Myanmar Online Bible
Wiki Myanmar (မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း)
wikipedia (အင်တာနက် စွယ်စုံကျမ်း)
Peoplemediavoice (Burmese News)